Xildhibaanada lagu doortay Baydhabo - Horseed Media
Xildhibaanada lagu doortay Baydhabo
Doorashada shan kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay.
Doorashada oo ka qabsoontay madaxtooyada magaalada Baydhabo ayaa waxaa goob joog ka ahaa kormeerayaal caalami ah, wakiilo ka socday guddiyada doorashooyinka iyo Saxaafadda. waxaana maanta halkaasi lagu soo doortay shan Xildhibaan.
Xubnaha kuraasta Golaha Shacabka ee maanta ku guuleystay ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa horrey kuraasta beelahooda ku matalayay oo dib markale loo doortay iyo qaar kale oo cusub oo ku soo baxay doorashada maanta.
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Nuuradiin Ibraahim, ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in shan kursi ay qabteen maanta, isla markaana si guul ah ay ugu soo dhamaatay doorashada.
“Maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Janaayo 2022, waxaa inoo qabsoomay doorashadii Golaha Shacabka, shan kursi oo ka mid ah 11-ka kursi ee aan shaacinay, shanta kursi waxaa ay kala ahaayeen: Hope#176, Hope#184, Hope#85, Hope#46 iyo Hope#156”. Ayuu yiri Nuuradiin.
Xasan Cabdinuur ayaa ku guuleystay kursiga koowaad ee tartankii maanta Hope#184, kaasi oo horrey uga tirsanaa Baarlaamanka Federaalka Soomaaliya.
Shariif Maxamed Cabdullaahi ayaa isna ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay Hope#85, kaas oo mar kale dib loogu doortay Xilka Xildhibaannimada.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa xusay in todobaadka soo socda ay shaacin doonaan waqtiga la qabanayo lix kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed Soomaliya.
Horrey waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah lagu soo doortay 11 kursi, waxaana tirada guud ee Baydhabo laga soo doortay ay gaareysaa 16-Xildhibaan.